अभियान क्लबद्वारा फुटट्रयाक वरिपरि वृक्षारोपण — donnews.com
१सुर्खेतको कट्कुवा सामुदायिक वनमा बम विस्फोट, दुई जना घाइते
२फाइजर खोप नेपालमा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लगाइने
३मुगु बस दुर्घटना- मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक लाख दिने
४महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत नारायण शर्माले दिए लेखा शाखाका कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की
५लमसुङ पहिरोको जोखिममा, पूरै वडा अन्धकारमा
६देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, तीन प्रदेशमा वर्षा
७एकीकृत समाजवादीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा अम्मरबहादुर थापा
८आज मुलुकभरका वडामा एमाले अधिवेशन हुँदै
९मुख्यमन्त्री राउतले बिज्ञप्ति नै निकालेर जिउँदो पत्रकारलाई श्रद्धाञ्जली दिएपछि…….!
१०लुम्बिनीमा सरकार निकटका मिडियालाई बजेट बाँडेको भन्दै विरोध
११एकाएक किन रोकियो काँग्रेस महाधिवेशन ? सिंगो केन्द्रीय समिति नै खिलापमा
१२गौतमबुद्ध विमानस्थलमा राख्न बनाइएको साढे २ अर्बको बुद्धमूर्ति भैरहवा पुर्याइयो
अभियान क्लबद्वारा फुटट्रयाक वरिपरि वृक्षारोपण
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ सराङकोट स्थित नवनिर्मित फुटट्रयाक वरिपरि सुन्दरताका लागि भन्दै अभियान युवा क्लवले वृक्षरोपण गरेको छ । सराङकोट भ्यु टावरबाट करिब ४ सय मिटर पश्चिमतर्फ दुई दैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँगको समन्वयमा क्लवले सुन्दरता दिने वृक्षहरु सारिएको हो ।
क्लवका अध्यक्ष राजु गिरीले वृक्षरोपणसँगै यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । फुटट्रयाकमा हिड्ने पैदलयात्रीलाई स्वच्छ वातावरणका साथमा सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने भन्दै सुन्दरता दिने वृक्ष सारिएको उनको भनाई थियो । वृक्षहरुको मलजल तथा संरक्षण गरि हुर्काउने जिम्मेवारीमा सबै लाग्न अनुरोध समेत क्लव अध्यक्ष गिरीले गरे ।
त्यस्तै दुई दैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन बहादुर थापाले उक्त फुटट्रयाकलाई अझ व्यवस्थित गरि संरक्षण गरिने बताए । क्लवले उक्त फुटट्रयाक वरिपरि ८० वटा सुन्दरता दिने विरुवा सारेको हो ।
त्यसैगरी कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र खत्रीले वृक्षरोपणमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै क्लव समाज सेवाका लागि लागिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा क्लवका निवर्तमान अध्यक्ष मोहनबहादुर केसी तथा दुई दैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव शुसिल जिसीले वृक्षको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन क्लवका सचिव मुक्त गिरीले गरेका थिए ।